DHEGEYSO-Kulan lagu taageerayey xulka Puntland oo kadhacay Caabudwaaq. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Kulan lagu taageerayey xulka Puntland oo kadhacay Caabudwaaq.
Luulyo 27, 2016 10:44 g 0
Caabudwaaw-July 28 2016–Magaalada Caabud-waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayey guushii xulka qaranka Puntland ka gaareen ciyaarihii maamul goboleedyada dalka ee kusoo xirmay magaalada Muqdisho.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada Caabud-waaq, maamulka degmada iyo xubno kale oo marti sharaf ah waxaana dhammaan dadkii ka qaybgalay u hambalyeeyeen horyaalka maamul goboleedyada Soomaaliya ee Puntland.
Madaxweynaha oo ka hadlay tartankii kubadda cagta ee lasoo afmeeray.
DHEGEYSO-Warbixin cida ka hadlaysa xaaladaha ammaan ee Muqdisho oo laysku haysto.